Farsamooyinka Farsamada Farsamada Injineerinka Farsamada 2022
Fursadaha Xirfadaha Farsamada ee Farsamada injineernimada
Ma raadineysaa fursado xirfadeed Farsamada injineernimada? Maqaalkani waxaa si gaar ah loo sameeyay si looga jawaabo dhammaan su'aalahaaga suurtagalka ah ee ku saabsan xirfadaha injineernimada farsamada.
Tiknoolajiyadda ayaa ku soo kordhay kuna soo hagaagtay xawaare cabsi leh tobankii sano ee la soo dhaafay. Amaanta horumarkan waa inay u tagtaa injineerada si joogto ah u qaabeynaya, u abuuraya, cusbooneysiinaya, una riixaya xuduudaha wixii aan ku guuleysan karno.
"Farsamada injineernimada farsamada waa adeegsiga mabaadi'da injineernimada iyo horumarka teknoolojiyadda ee abuurista mashiinno ama wax soo saar faa'iido leh. ”
Asal ahaan, waxaad ka caawineysaa injineerada mashiinka, falanqeeyaan sawirada naqshadeynta, diyaarinta qaababka, iyo qiyaasida kharashyada ku jira xamuulka waxyaabo kale oo qabow.
Shaqooyin noocee ah ayaa farsamayaqaannada injineernimada farsamadu ku heli karaan qalin-jabinta ka dib?
Liiska Ururada caanka ah ee kireysta farsamayaqaanada injineernimada
Immisa ayey qalinjabiyeyaashu sameyn karaan - lacag-caqli-gal ah - sidee se qalooca koritaanku ugu eg yahay adduunka?
Tirada ardayda ka qalin jabisay teknoolojiyadda injineernimada ayaa ka koray 407,688 sanadkii 2017 ilaa 409,670 sanadkii 2018. Heerka shaqada ee farsamayaqaannada injineernimada farsamada ayaa la saadaalinayaa koraan boqolkiiba 3 tobanka sano ee soo socda.
Shahaadada shahaadada ama shahaadada dugsiga sare, waxaad ku qaadan kartaa jagooyinka heerka gelitaanka, taageerida shaqada injineerada adoo duubaya oo falanqeynaya xogta, diyaarinta qaababka iyo qeexitaannada, iyo hubinta in tilmaamaha mashruuca iyo naqshadaha la raaco.
Bachelor Aardaygu wuu raadin karaa xirfad ahaan a injineer makaanik ah, qaasatan qaabeynta, cilad bixinta, iyo arjiga.
Injineerada noocan oo kale ah waxay inta badan ka shaqeeyaan dhirta korantada, laakiin sidoo kale waxay ka shaqeyn karaan qaboojiyaha, nidaamyada maaraynta qalabka, qalabka mashiinka, kaymaha, ama wax soo saarka.
Farsamo yaqaan injineer farsamo yaqaan ah wuxuu caawiyaa horumar kasta oo farsamo. Barashada tikniyoolajiyaddii ugu dambeysay iyo barnaamijyada softiweerku waxay u dhaqmaan sida isku-duwaha shaqo ee ugu fiican rajada.
Shahaadada tikniyoolajiyada injineernimada ayaa kuu fureysa fursado iyo fursado badan oo aad kaga heli karto suuqa shaqada. Maaddaama aad tahay farsamo yaqaan injineernimo farsamo, waxaad uqalaneysaa inaad dalbato shaqooyinka soo socda:
Bixiyeyaasha: Dadka wax qora ayaa adeegsada softiweer si ay ugu beddelaan naqshadaha injineerada iyo naqshadayaasha sawir farsamo. Inta badan shaqaaluhu waxay ku takhasusaan naqshadeynta, madaniga, korantada, ama qorista makaanikada waxayna isticmaalaan sawirro farsamo si ay u qaabeeyaan wax kasta min microchips ilaa daaraha dhaadheer.
Farsamayaqaanada Injineeriyada Warshadaha: Farsamo yaqaannada injineernimada warshadaha waxay ka caawiyaan injineerada warshadaha sameynta nidaamyo hufan oo isku dhafan shaqaalaha, mashiinnada, agabka, macluumaadka, iyo tamarta si ay u soo saaraan wax soo saar ama ay u bixiyaan adeeg.
Waxay diyaarsadaan mashiinnada iyo qaababka qalabka, waxay qorsheeyaan qulqulka shaqada, waxay qabtaan daraasado wax soo saar tirakoob ah, waxayna falanqeeyaan kharashyada wax soo saarka.
Mashiinnada iyo Qalabka iyo Kuwa Dhimashada sameeya: Mashiinnada iyo qalab sameeyayaasha iyo kuwa dhinta ayaa dejiya oo ku shaqeeya noocyo kala duwan oo qalabka mashiinka lagu kontoroolo kumbuyuutarka lagu xakameeyo si loo soo saaro qaybo biraha saxan, qalab, iyo qalab.
Engineer Mihnadeednayaa: Injineerada makaanikada ayaa qaabeeya, kobciya, dhista, oo tijaabiya dareemayaasha iyo aaladaha farsamada iyo kuleylka, oo ay ku jiraan aaladaha, matoorada, iyo mashiinnada.
Adiga oo xubin ka ah kooxda injineernimada farsamada, waxaad si deg deg ah oo wax ku ool ah u adeegsan doontaa adeegyada injineernimada xallinta dhibaatooyinka shirkadaha ku jira waqtiyo adag.
Farsamayaqaannada Adeegga: Farsamayaqaannada adeegga baabuurta iyo makaanikada, oo badanaa loogu yeero farsamayaqaannada adeegga ama farsamada adeegga, baaro, dayactiro, oo dayactiro gawaarida iyo gawaarida xamuulka.
In kasta oo farsamayaqaannada adeegga ay ka shaqeeyaan nidaamyada farsamooyinka dhaqameed, sida matoorada, idaacadaha, iyo suumanka wadista, waa inay sidoo kale yaqaanaan tirada sii kordheysa ee nidaamyada elektarooniga ah.
Farsamo yaqaanada injineernimada madaniga ah: Farsamo yaqaanada injineernimada madaniga ah waxay ka caawiyaan injineerada madaniga ah qorshaynta, qaabeynta, iyo dhisida jidadka waaweyn, buundooyinka, iyo mashaariicda kale ee kaabayaasha dhaqaalaha, warshadaha, hoyga, iyo mashaariicda horumarinta dhulka.
Farsamo yaqaanada injineernimada madaniga ah waxay ka shaqeeyaan xafiisyada, halkaas oo ay ka caawiyaan injineerada madaniga qorsheynta iyo qaabeynta mashaariicda. Farsamo yaqaannada injineernimada madaniga ah ayaa sidoo kale booqda goobaha shaqada halkaasoo uu ka socdo mashruuc dhismo, ururinta ama tijaabinta agabyada, u kuur galayaan mashruuca, una dhaqmayaan sidii kormeere mashruuc.
Injineernimada Gaadiidka: Injineernimada gaadiidka waa warshad muhiim ah oo had iyo jeer fiirisa farsamayaqaannada inay raacaan.
Goobtan, kooxo injineero iyo farsamo yaqaanno injineernimo ah ayaa ka shaqeeya horumarinta kaabayaasha gaadiidka sida waddooyinka, buundooyinka, kanaallada, dekedaha, iyo inbadan. Fahamka mabaadi'da naqshadeynta waxqabadka iyo dareeraha dareeraha ayaa muhiim u ah guusha booskan.
Farsamayaqaano Horumarinta Wax soo saarka: Farsamo yaqaan soo saare wax soo saar ayaa ka caawin doona injineerada soo saarida alaabooyin cusub, bixinta casriyeyn, iyo sameynta tijaabooyin haboon. Waxaad qorshayn doontaa kala dheereynta, soosaarida ama aqoonsiga iyo soo helida qalabka makiinadaha iyo qalabka sida lathes-ka mashiinka, makiinadaha layliga, iyo qaybaha birta ee saxda ah.
Waxaad sidoo kale gacan ka geysan doontaa rakibideeda, qorsheyneysaa qulqulka shaqada, iyo fulinta qaab socodka shaqada waxaadna hubin doontaa in hababka ganacsi ee ugu wanaagsan la raaco iyadoo la raacayo xeerarka caafimaadka iyo amniga.
Sidoo kale Akhri: Sida wax looga barto ugana shaqeeyo Kanada bilaa IELTS
Urur kasta oo la macaamila tikniyoolajiyadda wuxuu u baahan yahay farsamayaqaanno lagu kalsoon yahay oo ka caawin kara geeddi-socodka horumarinta isla markaana kobciya wax-ku-oolnimadeeda
Ururada caanka ah qaarkood:
Amazon Adeegyada Web
Dowladda Mareykanka (Ciidanka, Badda, Adeegyada Guud)
Mushaharka sanadlaha ah ee farsamayaqaanada farsamada injineernimada waa $ 56,980. Mushaaraadka sanadlaha ah ee dhexdhexaadka ah ee farsamayaqaanada injineernimada ee warshadaha sare ee ay ka shaqeeyaan waa sida soo socota:
Wax soo saarkii Kombiyuutarka iyo elektiroonigga $ 60,390
Adeegyada cilmi baarista sayniska iyo horumarinta $ 60,010
Soosaarida qalabka gaadiidka $ 58,310
Dhismaha, injineerinka, iyo adeegyada la xiriira $ 57,300
Warshadaha Mashiinka $ 56,310
Xigasho - https://collegegrad.com/careers/mechanical-engineering-technicians#become
Mashruucyada xogta shaqaalaynta guud ahaan shaqooyinka 43,800 oo leh cinwaanka shaqada Farsamo yaqaan injineernimada farsamada. Warshadaha guud ahaan way kobcayaan, iyada oo warshad kasta oo weyn ay raadineyso inay shaqaaleysato farsamo yaqaanno ka caawiya wax soo saarka iyo habka wax soo saarka. Qalinjabiyeyaasha leh shahaadada MET waxay sugi karaan shaqooyin heer sare ah oo soo gala waxayna sare u qaadi karaan safafka sidoo kale.
Raadinta shahaadada MET waxay fureysaa fursado aadan waligaa ogayn inay jireen. Horumar kasta oo farsamo oo muhiim ah oo dhaca wuxuu u baahan yahay caawinta farsamayaqaanada injineernimada farsamada.
Haddii aad rabto inaad tijaabiso tiknoolajiyada kala duwan, gacmahaaga wasakh, ku raaxayso codsiyada wax ku oolka ah iyo xaaladaha xallinta dhibaatooyinka, isqor kulliyad farsamada injineernimada farsamada oo bixisa fursado cajiib ah arimahan oo leh shahaado sida jimicsi dhakhtar, oo bilaabi kara mustaqbalkaaga.
Ganacsiga iyo Shaqooyinka damaanadqaaday
Previous Post:Sidee Ardayda Caalamiga ah uga Faa'iidaysan karaan Waxbarashada Ganacsiga Internetka
Post Next:22 Shabakadaha deeqaha waxbarasho ee ugufiican Ardayda Kulliyadaha Caalamka